Saeco Coffee Machine Company ကို 1981 ခုနှစ်မှာ Sergio Zappella နဲ့Arthur Schmed တို့ က တည်ထောင်ခဲ့တာပါ ။
1985 ခုနှစ်မှာတော့ ပထမဆုံး automatic espresso machine ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး Superautomatica လို့ အဲ့ စက်ကို ခေါ်ခဲ့ပါတယ် ။Read More
ဒီ Nivona 646 ကတော့ Swissland အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Cappuccino,Espresso and Latte တိုဖျော်သောက်နိုင်ပါတယ်…Read More
Tuesday, April 28, 2015 3:47:04 PM Asia/Rangoon
Coffee Machine တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ .. တော်တော်များများ သိပြီးသားလဲ ဖြစ်မှာပါ ...Coffee Machine တွေကို နေ့ စဉ် အသုံးပြုပီးတဲ့နောက် ဆေးကြောသန့် စင်တဲ့အခါမှာ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းနဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြုတ်တပ်ဆင်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်စရာမလိုပဲ ... သန့် စင်ပေးမဲ့ Powder , Tablet and Liquid တွေမျိုးစုံ ရှိပါတယ် ..Read More
Cleaning Cleaning Products Powder Tablet Urnex
Saturday, April 25, 2015 3:50:44 PM Asia/Rangoon
Thursday, April 23, 2015 4:21:01 PM Asia/Rangoon
Bezzera B2013 ကတော့ Australian ဈေးကွက်မှာ အချိန်အတော်ကြာ နာမည်ကျော်ကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့ Bezzera B2000 espresso coffee machine ကို Modern ထပ် မြှင့်ထားတာပါ ။ နောက်ဆုံးပေါ် Modern ဖြစ်သလို Bezzera Brand အနေနဲ့ သုံးစွဲရလွယ်ကူအောင် .. အကောင်းဆုံးပုံစံ အနေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာပါ ။သူ့ ရဲ့ ထူးခြားချက်က Automatic လဲပြုလုပ်လို့ ရသလို Manual လဲသုံးလို့ ရပါတယ် ... တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အကုန်လုံးကို သုံးစွဲရလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ် /Read More
Thursday, April 23, 2015 4:19:42 PM Asia/Rangoon
Bezzera BZ10 ကတော့ ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း လေးထောင့်ပုံစံ ဖြစ်ပြီး latte နဲ့cappuccino အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ကော်ဖီ အရသာကိုပါ ဖန်တီးပေးမှာပါ ..အိမ်မှာကော ရုံးမှာပါ အသုံးပြုဖို့ အပြင် .. ကော်ဖီဆိုင် နဲ့ဟော်တယ်တွေ အတွက်ပါ အသုံးတည့်ပါတယ် ..သူ့ ရဲ့ ထူးခြားချက်က boiler system နဲ့heating system တွေပါ ...Bezzera ရဲ့Coffee Machine တွေက အခု Coffee Shop တွေ ၊ Hotel ၊ Office တွေမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Automatic coffee machine တွေအတိုင်းအသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ် .... Read More
Thursday, April 23, 2015 4:13:22 PM Asia/Rangoon
အကောင်းဆုံး အမျိုးအစား အိမ်သုံး ကော်ဖီစက်တွေ က သင့်အိမ်မှာ သင်ကိုယ်တိုင် Barista တစ်ယောက်ပမာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အနံအရသာ နဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကော်ဖီကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ် ... ရုံးမှာလဲ သုံးလို့ ရသလို အိမ်မှာလဲ သုံးတဲ့အခါမှာ သုံးစွဲရလွယ်ကူပီး အဆင်ပြေတဲ့ကော်ဖီ စက်တွေထဲမှာ Bezzera Domus Galatea ကလဲ တစ်ခု အပါဝင်ပါပဲ ... ကိုယ့်အိမ်မှာ Coffee Bar လေးလုပ်တဲ့အခါ မပါမဖစ် Espresso machine ပါ။ဆိုင်တွေ ဟော်တယ်တွေ မှာ အသုံးပြုတဲ့အခါလဲ သင့်ရဲ့Customer ကို Italian Style Coffee အနံ အရသာ အပြည့်အ၀ ပေးနိူင်မဲ့ အမျိုးအစားဆိုလဲ မမှားပါဝူး ... Read More
Friday, April 3, 2015 12:32:08 PM Asia/Rangoon
A coffee grinder is an important equipment needed for brewing coffee with premium aroma and flavor. However, you must selectagrinder that befits your specific needs and interests. Based on customer reviews, Eureka Mignon Istantaneo is considered one of the best coffee grinders owing to its exceptional performance and longevity.Read More
eureka mignon istantaneo
offee roasting tools